MA DHABA IN AMINA WERIS DIIDAY XUBNIMADII GOLAHA DHEXE EE MUUSE BIIXI U CUMAAMADAY | Saxil News Network
MA DHABA IN AMINA WERIS DIIDAY XUBNIMADII GOLAHA DHEXE EE MUUSE BIIXI U CUMAAMADAY
Hargeysa (SAXILNEWS)_Marwada Madaxweynaha Somaliland Marwo Amina Maxamaud Jirde (Aamina Waris) ayaa la sheegay in Gabi ahaanba Golihii Dhexe ee Kulmiye ee lagu diray ay diiday, waxana la sheegay in Liiskii uu Muuse Biixi soo saray ee ka kooban 23 Qof ee Magaceedu ku qornaa ay ka cudurdaartay isla markana sheegtay in wakhtigan aanay ka mid noqon karayn Golaha dhexe ee Kulmiye.
Warar Hoose Waaheen helayso ayaa sheegaya in markii danbe lagu bedelay Sahra Qaadi oo buuxisay booskii ay ka cudurdaartay Marwo Aamina Waris.
Sabaha ugu weyn ee Marwo Amina waris u diiday ka mid noqoshada Golaha dhexe ee Kulmiye ayaa ah ka dib markii Duufano siyaasadeed Ruxeen Madaxtooyada, iyada oo Xubno baddan oo marwadu isku haleynaysay ay ka Baxeen Xukumada sida wasiiradii ka baxay Xukumada.
Waxa kale iyana Culus ku keenay ka dib markii liiskii Muuse Biixi lagu arkay in xubno baddan oo Marwada la socday ay ka baydheen kuwaasi oo taageersana Musharixiinta kale isla markan u cadaatay in ay dhinca tahay Aamian Waris.
Madaxweynaha Somaliland ayaa mar walba sheega in uu Dhex u yahay Musharixiinta ku tartamaysa kulmiye Balse waxa haddana la arkay Marwadiisa oo ku jirta liiska Golaha dhexe ee Kulmiye ee Muuse soo magaacabay iyo waliba Wiilka uu sodoga u yahay, iyada oo madaxweynuhu leeyahay 10 Xubnood oo si gaar ah u soo magacaabo, balse isweydiintu waxay tahay sababta Madaxweynuhu markii hore liiskiisa ugu soo dariwaayey Marwada ee isagu gaarka u soo magacaabo, ee liiska Muuse loogu soo daray.